Bacda Difaaca Dabka, Alaabada Ka Hortagga Dabka, Dharka Difaaca Dabka - Weicheng
Kusoo dhawow WEICHENG
Weicheng Fire Prevention Technology Group Co., Ltd. waa shirkad kiimiko ah oo ku hawlan soo saarida iyo soo saarida qalabka ka hortaga dabka iyo qalabka ka hortaga dabka, oo leh qalab wax soo saar bisil oo gudaha ah iyo qalab. Shirkaddu waxay leedahay waaxda tikniyoolajiyadda, waaxda wax soo saarka, waaxda kormeerka tayada, waaxda maareynta shirkadaha, waaxda adeegga iibka kadib, waaxda suuqgeynta, waaxda suuqgeynta, waaxda maaliyadda, waaxda shaqaalaha. Iyada oo loo marayo ISO9001: shahaadada nidaamka maaraynta tayada 2000, nidaamka tayada adag wuxuu hubiyaa tayada sare iyo xasilloonida sare ee alaabteenna.
Waxaan si adag u aaminsanahay in illaa iyo inta tixgelinta macaamiisha, iimaanka wanaagsan uu yahay aasaaska, nolosha daacadda ah, uu saaxiib kuu noqdo.
Iyada oo loo marayo ISO9001: shahaadada nidaamka maaraynta tayada 2000, nidaamka tayada adag wuxuu hubiyaa tayada sare iyo xasilloonida sare ee alaabteenna.
Qaabdhismeedka birta ah ee gudaha iyo dibedda qaabdhismeedka dabka-dab-damiska ah, fiilooyinka dabka-celiya dabka iyo alaabada kale ee horseedka ah waxay ku raaxaystaan ​​sumcad sare Shiinaha.
Ku saleysan Daacadnimo
Naqshadeynta wax soo saarka, wax soo saarka iyo iibinta, shirkaddu had iyo jeer waxay u hoggaansan tahay falsafadda ganacsiga ee "daacadnimada u janjeedha iyo qummanaanta ku saleysan"
Waxaa jira 22 nooc oo ka mid ah 5 taxane ah oo ka mid ah wax soo saarka shirkadeena.
Qalabaynta wax soo saarka iyo baakadaha ayaa la kulmi kara dhammaan shuruudaha kala duwan ee macaamiisheena.
Weicheng Fire Prevention Technology Group Co., Ltd. waa shirkad kiimiko ah oo ku hawlan soo saarida iyo soo saarida qalabka ka hortaga dabka iyo qalabka ka hortaga dabka
1. Maxay tahay in la tixgeliyo marka laga iibsanayo qalabka isku dhejisan ee dabiiciga ah khadka tooska ah? Sidee loo sameeyaa xulashada saxda ah? Iibsiga khadka tooska ah ee walxaha ku-xirnaanta dabiiciga ee macnaheedu yahay in alaabta la iibsado ...
Sida loo doorto fiilo dabiici ah oo dabacsan ...
Maaddaama ay tahay nooc cusub oo qalabka wax lagu xiro, moduleka dab-demiska ah wuxuu si dhakhso leh u qabsaday dhererka amarka ee qalabka fiilada wuxuuna noqday mid kale oo loogu jecel yahay suuqa qalabka dhismaha. Dhalashada dembiilaha ...
Wei Cheng moduleka kahortaga dabka si loo sameeyo amaan ...
Sanadihii la soo dhaafay, gobolku wuxuu feejignaan dheeri ah u siiyey ka hortagga dabka ee mashaariicda dhismaha, tiro aad u badan oo ah qalabka ka hortagga dabka ayaa lagu dabaqay dhismaha injineernimada. Db-a3-c ...
Xirmada dab-damiska "Ballaarinta" ...